National League for Democracy | အမျိုးသား​ဒီမိုကေရစီ​အဖွဲ့ချုပ်: ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍ
National League for Democracy | အမျိုးသား​ဒီမိုကေရစီ​အဖွဲ့ချုပ်
The National League for Democracy (Burmese: အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ်) isaBurmese political party founded on 27 September 1988. House Representative and Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi serves as its General Secretary. The party wonasubstantial parliamentary majority in the 1990 Burmese general election.
ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်ရန်နှင့် အမှီခိုကင်း​၍ အင်အား​ ​ေတာင့်တင်း​ခိုင်မာ​ေစရန် ​ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး​မှုတို့မှ ကင်း​​ေဝး​​ေစရန်တို့အတွက် အဓိကဦး​​ေဆာင်မှု ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။
​ေခတ်နှင့် မ​ေလျာ်ညီ​ေတာ့သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ဖျက်သိမ်း​ရန်။
စစ်မှန်သည့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ ြဖစ်ထွန်း​​ေပါ်​ေပါက်​ေစရန်။
နိုင်ငံသား​များ​၏ ​ေမွး​ရာပါနှင့် ဥပ​ေဒပါအခွင့်အ​ေရး​များ​ကို အကာအကွယ်​ေပး​ရန်။
စီး​ပွား​​ေရး​၊ ပညာ​ေရး​၊ ကျန်း​မာ​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​၊ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​​ေရး​ စသည့် ကဏ္ဍများ​ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေစရန် စသည့် နိုင်ငံ​ေတာ်စဉ်ဆက် မြပတ် ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေရး​နှင့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်အြဖစ် အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ ခိုင်ြမဲ​ေရး​တို့ကို အ​ေလး​​ေပး​သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ြပဋ္ဌာန်း​ရန် အ​ေလး​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက် ရမည်။